Die Casting Engineering - Dingana fanariana maty - Casting Minghe
Mitondra endrika mpamorona injeniera - Sampan-draharaha misahana ny injeniera any Shina
Ny fanariana maty dia mitaky ny fametrahana ny vokatra farany izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny endrika, fivoriambe ary ny asany. Mba hahatratrarana ireo fenitra mazava ireo, ny mpamokatra fanariana vy maty kalitao dia tokony handinika ny vidiny sy ny vidiny ary ny fizotran'ny vokatra fanamboarana manana fiainana lava ary manakaiky ny fahalavorariana.
Betsaka ny paikady amin'ny injeniera maty hanary ny vidiny, hampitombo ny vokatra ary hanatsara ny kalitaon'ny vokatra. Matetika, ny mpanjifa dia hahafantatra ny filan'izy ireo amin'ny casting avo lenta. Afaka manome serivisy famolavolana namboarina izahay mba hamolavolana endrika matanjaka sy miasa izay tsy mahafeno ny filan'ny mpanjifa ihany, fa mahafeno ny fenitra azo antoka indrindra.
Ny ekipanay injeniera dia nanangana ny marina ho ambaratonga vaovao hatrany am-piandohan'ny tetikasa ka hatramin'ny famokarana farany ny faritra avo lenta. Ny famolavolana ny famokarana-DFM-dia manomboka amin'ny famakafakana feno momba ny famaritana mba hamaritana ireo fitaovana sy fomba afaka mamokatra ny ampahany lafo indrindra sy manome ny vokatra tsara indrindra. Mampiasa rindrambaiko injenieran'ny solosaina manara-penitra izahay, izay afaka mamorona prototypes voalohany amin'ny rakitra hamaritana raha ilaina ny fanatsarana alohan'ny hamokarana tanteraka ireo faritra natokana.
Ny tombony azo amin'ny teknikan'ny casting casting
Ny asan'ny injeniera maty casting dia azo fintina toy izao:
- Fahamarinana tena lehibe (miankina amin'ny fitaovana fanariana, fa matetika 0.1 mm ho an'ny 2.5 cm voalohany (0.004 santimetatra ho an'ny santimetatra voalohany) ary 0.02 mm isaky ny santimetatra fanampiny (0.002 santimetatra isaky ny santimetatra fanampiny).
- Toerana miloko malefaka (Ra 1-2.5 micrometre na 0.04-0.10 rms).
- Ny rindrina manify dia azo atsipy raha oharina amin'ny fasika sy ny famolahana bobongolo maharitra (manodidina ny 0.75 mm na 0.030 in).
- Ny fampidirana dia azo atsipy (toy ny tsisin'ny kofehy, singa fanamafisana, ary sehatra avo lenta).
- Mampihena na manafoana ny asan'ny machining faharoa.
- Taham-pamokarana haingana.
- Fandefasana tanjaka mahatratra hatramin'ny 415 megapasikaly (60 ksi).
- Fanariana metaly mora mifehy.
Karazan-tsoratry ny injeniera famoahana maty - Serivisy fanampiny ao amin'ny Minghe